AUR packages များ (Arch Linux) နှင့်အတူဒေသခံ repository ကို Linux မှ
AUR packages များ (Arch Linux) ဖြင့် local repository
x11tete11x | | အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် source code-based distros များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်၊ အားလပ်ရက်တွင်ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူခြင်းဖြစ်သည် funtoo၊ ၎င်းသည်စနစ်ပျက်စီးသွားသည် (ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့နှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကဲ့သို့မခံစားရပါ) ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အခွင့်အရေးအသစ်တစ်ခုပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Arch Linux ကိုငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုမိန်းမနှင့်ငါ့ပြmyနာကဘာလဲ ငါအသုံးပြုသောအခြေခံအားဖြင့် အများကြီး ဆော့ဝဲ AUR (ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စာဖတ်သူများအဘို့ AUR, သည်တရားဝင် repos တွင်မပါရှိသောပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုသူများသည် upload လုပ်သည့် "repo" နှင့်တူသည် Ubuntu ကို).
ဒီပြwithနာကဘာလဲ? ဆော့ဖ်ဝဲကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်သည် AUR ပြုပြင်မွမ်းမံသူများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏ package များကိုလျစ်လျူရှုသောကြောင့်သို့မဟုတ်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ဗဟုသုတမရှိသောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ဤသည်မှာအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အလွန်အလွန့်အလွန်ဒေါသထွက်နိုင်သည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသွားငါချိုးဖျက်ကြောင်းစုစည်းမှုများနှင့် pkgbuilds Gentoo/funtoo.
ဤတွင်စာမျက်နှာ၏စာရင်းဇယားဖြစ်ပါတယ် oficial ရက်ရက်ရောရောနှင့်အသစ်မွမ်းမံထားသော Packages များနှင့်မိဘမဲ့ဂေဟာများအတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီးကျွန်ုပ်တို့ ၁/၄ နီးပါးရှိသည် AUR ဒါငါ့အလုပ်ကဒါငါ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး ဒီတစ်ကြိမ်မှာဘာထူးခြားသလဲ။
4 packages များထည့်ပါ
5 ဒေသခံ repository ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
6 ရွေ - "အထုပ်စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပါ"
အက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်တော်ရှာခဲ့တယ် ဒေသတွင်း repoတစ်စုံတစ် ဦး ကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကိုသင်မြင်ရသော၊ AUR ငါလိုပဲသူဟာအနည်းဆုံးအသုံးပြုသူကိုဒီ "ပြproblemsနာများ" ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဒီအပလီကေးရှင်းကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတာက local repository တစ်ခုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ AURဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် package များ၏မှန်ကန်စွာစီစဉ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဂရုစိုက်နိုင်သည် AUR.
tar -xf local-repo.tar.gz
yaourt -S --noconfirm local-repo
ထိုနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း local-repo ကိုဖိုင်မှတဆင့်ပြုပြင်ရမည်။~ / .config / local-repo»ကန ဦး တွင်၎င်းသည်ဗလာကျင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ repo ကိုသိမ်းဆည်းမည့်ဖိုင်တွဲများကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x
mkdir -p ~/.repo/x11tete11x/logs
mkdir -p ~/.repo/x11tete11x/pkgbuilds
mkdir -p ~/.repo/x11tete11x/pkgs-x86_64
ယခု "~ / .config / local-repo" ကိုပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် local-repo ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်ဆိုသည့်ဥပမာများရှိသည်မှာသတိပြုပါ။ /usr/share/local-repo/config.example
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် local-repo ကိုသုံးချင်တာကအရမ်းအခြေခံကျတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပဲ။
[x11tete11x] path = /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/pkgs-x86_64
sign = no
signdb = no
log = /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/logs/local-repo-log
buildlog = /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/logs/build-logs
pkgbuild = /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/pkgbuilds
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါတစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်ကရချင်သလဲဆိုတာကိုငါပြောတယ်၊ ဒီမှာဒီတစ်ခုလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အခြေပြုတဲ့ post ကနေတစ်ခုချင်းစီကိုဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။
လမ်းကြောင်း -> repository package ၏တည်နေရာကိုဖော်ပြသည်။
အမှတ်လက္ခဏာ -> packet များကို PGP key ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပါ။
ဆိုင်းဘုတ် -> ဒေတာဘေ့စ်ကို PGP key ဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပါ။
တုံး -> local repo မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းမည့်ဖိုင်နေရာ။
မင်္ဂလာပါ -> ဖိုင်တွဲများကိုတည်ဆောက်ရာတွင်မှတ်တမ်းများသိမ်းဆည်းထားမည့်ဖိုင်တွဲ။
pkgbuild -> ဖိုင်တွဲများကိုဖိုင်တွဲများသိမ်းရန် PKGBUILD.
ဖြည့်စွက်ရမည့်အထုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်တွဲများ၌အထုပ်အပိုးများဖြစ်နေလျှင် (ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီးဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲရှိလျှင်သို့မဟုတ်စုဆောင်းရန်ရည်မှန်းထားသောကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်အတွင်းရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်အထုပ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားလျှင်) ၎င်းနှင့်အတူထည့်သွင်းရမည်။
local-repo nombre-del-repositorio -a ruta-del-paquete
ထိုသို့တစ်အထုပ်လျှင် AUR ငါတို့အသုံးပြုသည်
local-repo nombre-del-repositorio -A nombre-paquete
ရှင်းလင်းချက် - သင်ထည့်သွင်းလိုသော package သည်အခြားမှီခိုမှုတစ်ခုရှိပါက AURဤမှီခိုမှုကို "အလိုအလျောက်မဖြေရှင်းနိုင်" ပါ
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် package ကို install လုပ်လိုပါကဖြစ်သည် appmenu-gtk2 အဲဒါပေါ်မူတည်တယ် libdbusmenu-gtk2 ဘာလဲ AURကျနော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူး
ဒေသခံ repo x11tete11x -A appmenu-gtk2
local-repo nombrerepo -A libdbusmenu-gtk2 ပြီးတော့ local-repo nombrerepo -A appmenu-gtk2
ဤလမ်းသည် libdbusmenu-gtk2 မှီခိုမှုကိုရှာဖွေသောအခါ၎င်းသည် repos တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။
အထုပ်တစ်ခုထည့်ရန်သင်က၎င်းကို repository ဖိုင်တွဲသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် ~ / .repo / x11tete11x / pkgs-x86_64) ပြီးနောက်ဒေတာဘေ့စ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်
local-repo nombre-del-repositorio -r nombre-paquete
local repository ကို repositories စာရင်းသို့ထည့်ပါ
ဖန်တီးထားသော repository ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေသော repositories စာရင်းတွင်ထည့်ရမည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် /etc/pacman.conf ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ repo သည် ဦး စားပေးရရှိရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိုင်းများကိုတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြွင်းသောအရာ၏အထက်တွင်၊ ထပ်တိုး repo တစ်ခုအနေနှင့်လည်းအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
[x11tete11x] SigLevel = Optional TrustAll
Server = file:///home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/pkgs-x86_64
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့၏ databases ကိုထပ်တူပြုခြင်း Pacman နှင့်ငါတို့ repository ကိုအဆင်သင့်ရှိသည်။
မှတ်စု: ငါပထမဆုံးအကြိမ်ထပ်တူပြုလိုသည်ကကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုပေးခဲ့ပြီး၎င်းဖိုင်ကို« /home/x11tete11x/.repo/x11tete11x/pkgs-x86_64/x11tete11x.db »ကိုရှာ။ မတွေ့နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ MARKDOWN_HASH1a42f7dd94ef93f234b52c01c73dc5f0MARKDOWN_HASH ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်၎င်းကဲ့သို့သောအချည်းနှီးသောဖိုင်ကိုဖန်တီးသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထပ်တူပြုသည့်အခါမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းမွမ်းမံပြီးမှန်ကန်စွာစတင်အလုပ်လုပ်သည်။
ဒေသခံ repository ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ repository အလုပ်လုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကို update ပြုလုပ်ရန်ဂရုစိုက်ရမည်။
local-repo -UV nombre-del-repositorio
ထို option -U တွင်တွေ့သော packages များ update AUR နှင့် option ကို -V ထံမှ CVS packages များ update AUR (ဥပမာ git, svn သို့မဟုတ် cvs များကဲ့သို့)
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် repo ၏ screenshots အချို့:
ရွေ - "အထုပ်စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပါ"
ကျွန်ုပ်တို့ package များကို compile လုပ်သောကြောင့် default အားဖြင့် disable လုပ်ထားသော option များထဲမှတစ်ခုကိုထိလိုက်ခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကိုအနည်းငယ်မြန်ဆန်စေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့်အရာသည် makepkg အား kernels အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ဤအတွက် compile လုပ်ရန်ပြောသည်။ လိုင်းကိုကြည့်ပါ - MAKEFLAGS »အတွင်းပိုင်း /etc/makepkg.conf တွင်ကျွန်ုပ်တို့« = -j »ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည် 7-core Core I4 HT အတွက် ၄ င်းသည်ယုတ္တိတန်သောထပ်ကိန်း ၄ ခုထပ်ထည့်သည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ MAKEFLAGS သည်ဤသို့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အကြံပြုပါသည် » AUR packages များ (Arch Linux) ဖြင့် local repository
55 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကောင်းတယ်၊ ငါ့ဟာအလုပ်လုပ်တယ် works
ပြီးတော့ငါ Gentoo / Funtoo ကိုဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။
ငါမင်းကိုပြောတယ် openSUSE hehehe ။
သို့သော်လည်းငါသည်တချိန်ကလေးသမားဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်တစ် ဦး စကားပုံရှိပါတယ်။ "Arch ကို install ပြီးတာနဲ့သူကအမြဲပြန်လာပါတယ်။ "
aggggghhhh ကျေးဇူးပြုပြီး Suse ငါမုန်းတယ်! G + မှာအကြောင်းရင်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ Yast gtk ဗားရှင်းမှာ Yast အကြောင်းငါပြောခဲ့တာကကောင်းပြီ။ ¬¬ငါ့ကိုနိမ့်ကျမှုအတွက်ပိုပေးတယ်၊ Suse ရဲ့ firewall ကမုန်းတယ်၊ ငါ Lubuntu ကိုအစားထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Opensuse + LXDE မှကျွန်တော့်အဟောင်းမှကွန်ယက်ပရင်တာကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက် firewall နှင့်ကျွန်တော်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ Lubuntu က၎င်းကိုဘာမျှမဟုတျဘဲငရဲကဲ့သို့အသိအမှတ်ပြုပါသလား။ mediatomb သည်တရား ၀ င် "repos" တွင်မှီခိုမှုမရှိခြင်းကြောင့်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်းဤအကြောင်းပြချက်များနှင့်အတူတူလုပ်ဆောင်ရန် application များ၏နှစ်မျိုးလုံးသည် Suse no thanks xD
Hahahaha OpenSUSE + KDE ကိုသင်တပ်ဆင်ရမည်။
ကောင်းပြီ, အရာအားလုံးအဘို့အရသာရှိပါတယ်။ သို့သော် openSUSE စည်းမျဉ်းများ။
ငါ့အတွက်ဒါဟာမှန်ပါတယ် ငါ့ကိုကြည့်ပါ ဦး ဟားခါး
OpenSUSE elav ကိုလည်းမုန်းပါသလား၊ hehe
openSUSE ကိုငါမကြိုက်ဘူး။ ငါကြိုးစားခဲ့ဖြန့်ဝေအားလုံး, ကအမြဲတမ်းအလေးလံဆုံးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Tssss, ခင်ဗျားကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်၊ အရမ်းတော်တယ်😀
ငါ KDE 4.10 နဲ့တကယ်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်၊ ဒါကတိုးတက်လာတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး၊ ငါမကြိုက်တာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းရှိတယ်။ Debian နဲ့ Arch Linux တို့အကြားမှာလည်းငါအရမ်းပျော်တယ်။
Hahahaha, Debian မှာလည်းအဲဒီလိုပဲ။
ဒီနှစ်မှာအရမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ package တွေလိုမျိုးအရာတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်7beta update ကို install လုပ်ပါ။
ငါ openSUSE Tumbleweed KDE နှင့် Slackware KDE နှင့်အတူကပ်။ ငါ Arch ကိုကြာမြင့်စွာပြန်ချင်နေတယ်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုး ၈ နှင့်ပျော်ရွှင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနတ္တစိတ်ဖြင့်ခေါင်းပြောင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်အတွက်ပရိုဂရမ်ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ (သို့) ၀ င်းဒိုးစတိုးမှလွယ်လွယ်ကူကူ နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လွယ်ကူသည်။
ငါထူးဆန်းသောအရာတို့ကို configure နာရီဖြုန်း, ငါကျန်ကြွင်းရစ်သောအချိန်ကိုငါယောက်ျားတွေသင်၏ယောက်ျားစတုရန်းတင်းပါးနှင့်အတူထိုကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏ system ကိုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်လာနေစဉ်ပျော်စရာပျော်စရာနှင့်ငါ့မိသားစုနှင့်အတူထွက်သွားဖို့က၎င်း၏အားသာချက်ယူ။ ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်။
အလယ်အလတ်အားဖြင့်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှု - patricio72 ၏ Windows တွင်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှုမရှိပါ။
အလားတူပင်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ ငါ့မိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပါ၊ ကျွန်ုပ်၏တင်းပါးသည်စတုရန်းလေးလာနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်သစ်ရွက်များ ဆက်၍ ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်ပိုမိုသိရှိလာသည်။ 😉
သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ရည်းစားများနှင့် ၃ ပတ်ကြာအောင်နေခဲ့ရသည်။ တစ်နေ့၊ Epson XP-3 ကို Windows တွင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ရှုံးသည်။ Windows XP သည်ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အိမ်၌ရှိသည့်ပြတင်းပေါက် ၂ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြproblemsနာမရှိဘဲတစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ Lubuntus အားလုံးကအိမ်မှာသူတို့ကိုပြwithoutနာမရှိဘဲခေါ်သွားတယ်။ ငါ့အဖေက Ubuntu စတိုးကနေကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ပရိုဂရမ်တွေလည်းတပ်ထားတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မည်သူကမျှဂရုမစိုက်သည့်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဘာလုပ်သနည်း။ သငျသညျ android မှပို့စ်တင်, အဲဒီမှာ android အခြေပြုအဘယ်အရာကိုဖတ်ပါနှင့် Linux kernel နဲ့ android kernel အကြားအတိအကျကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖတ်ပါကသင်ပြောနေတာကိုနားလည်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည့်သင်၏သနားစရာအငြင်းပွားမှုနှင့်အတူသင်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် သင်ကိုယ်တိုင်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်အင်တာနက်ကိုသင်ဘာလုပ်သနည်း။ ဆိုလိုတာက Linux ဆာဗာတွေပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားတယ်။ နောက်တစ်ခုကမိုက်မဲတဲ့အရာ၊ သင်ဒီမှာဘာမှတ်ချက်ပေးနေတာလဲ။ မင်းရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေသင့်တယ်မဟုတ်လား။ နောက်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာကစားဖို့ငါ့ညီမှာ windows7ရှိတယ်။ ငါ disk တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ gadget တစ်ခု install လုပ်တယ်။ windows store ကအဆင်ပြေတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်။ malware ကူးစက်တယ်။ Chrome ရော Firefox ပါကူးစက်ခံထားရတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ကြော်ငြာတွေ ... အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကိုရဖို့ "ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေ" လုပ်ရမယ် ... (ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး HA) ငါ AVG အပြည့်အဝမွမ်းမံပြောကြားခဲ့သည်မှာ - "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါနဲ့တူခံစားရတယ်, မဥစ္စာ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ system ကို configure လုပ်ပြီး၎င်းမှအပြည့်အဝအသုံးချရန်ကျွန်ုပ်ကိုဖျော်ဖြေပါကဘာလဲ။ ဤအမှားလား၊ မှန်မှန်ကန်ကန်သင်ဘာမှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ပါ။ aaaaa အမှန်အကန် Windows Windows ၏ Starter ဗားရှင်းသည် IPP protocol ကဲ့သို့မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုကိုအထောက်အပံ့မပေးသောကြောင့် Linux အောက်ရှိ CUPS ဆာဗာနှင့်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ သုံးစွဲသူများ၏စကားဝှက်များအတွက်စာဝှက်စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ၆ နှစ်ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ Windows6to XP system95 ဖိုင်တွဲသို့သွားရန် User.pwl ဖိုင်ကိုကူးယူရန်လုံလောက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိမ်တွင်း၊ ငြိမ်သက်မှု၊ brute force သို့မဟုတ် rainbow table များဖြင့်အသုံးပြုသူ၏စကားဝှက်ကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ aaaa အမှန်ပါ၊ windows XP တွင် "Bush သည်ပဲ့တင်သံများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်" သို့မဟုတ် "Bush က facs ကိုဝှက်ထားခြင်း" ကို txt ထဲတွင်ထည့်ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ရင်၊ သင်ကဆင်ဆာလုပ်လိမ့်မည်။ ပြတင်းပေါက်မှန်များ
သူ့ကိုလျစ်လျူရှုပါ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ရည်းစား၊ အရာရာနဲ့ငါ GNU / Linux ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အချိန်အများကြီးပေးတယ်။
cat to Reply
Troll နှင့်အလွန်သိသာ xD
SnocK ပါ ဟုသူကပြောသည်
Oo မင်းယုံမှာလား။ ယခုတွင်၎င်းတို့သည် window 8၊ f8 key ကိုဘယ်မှာထည့်ထားသနည်း။
တူညီသောဇာတ်လမ်းဟောင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် linuxero ၏ပုံမှန်မှတ်ချက် "အင်တာနက်အများစုသည် linux ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်၊ ၎င်းသည် android linux နှင့် blah blah blah"
android ဟာ linux kernel ကိုသုံးတယ်ဆိုတာသိပေမယ့် gnu / linux မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးပြီး၎င်း၏စားသုံးသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလွယ်ကူသောဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခုက linux ပေါ်တွင်အင်တာနက်တစ်ခုလုံးလည်ပတ်နေသည်ဟူသောအရာသည်အမှန်အကန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည် webservers များမှဆောင်ရွက်သောနောက်ခံလုပ်ငန်းများ၊ ဥပမာ Apache, PHP, MySQL, တိုတောင်းသောအားဖြင့်သူတို့သည် web service များသာဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီအချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ DESKTOP အကြောင်းပြောကြရအောင်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်၊ Linux မှာသွားရမယ့်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါတို့ရဲ့ hardware အတွက်လျောက်ပတ်သောဒရိုင်ဘာတွေမရှိဘူး၊ Adobe suite, Office, Autocad လိုလျောက်ပတ်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖ်ဝဲတွေမရှိဘူး၊ အလွန်ယုတ်ညံ့။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်အသုံးပြုသူသည် EASE နှင့် windows တွင်ပါ ၀ င်သည့် console တစ်ခုရှိသော်လည်းသင် sysadmin သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်မည်သူမျှအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ Linux နှင့်မတူသည်မှာအရာအားလုံးသည်ဂရပ်ဖစ်အဆင့်တွင်ပြုလုပ်သည်၊ သင်က command တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်မှုဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက် console ကိုမကြာခဏအသုံးပြုရပြီး၊ အမှန်တရားမှာ၊ ဘုံအသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ဆိုးရွားသည့်အရသာကိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့ကသူ့အတွက်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်စေချင်တယ်။
ဤမှတ်ချက်သည်အဖြေတစ်ခုအနေဖြင့် @ x11tete11x သို့သွားသည်
ဟုတ်ကဲ့လူ၊ x11tete11x အတွက်သိထားတယ်။ သို့သော်အလေးအနက်ထားရသော်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသောစကားကဲ့သို့မြုံနေသောငြင်းခုံမှုတစ်ခုသို့ကျရောက်ခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။
ငါမှတ်ချက်များဤအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ပါကငါ့ကိုယားယံစေသည်။ "အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း" ကိုသတ်မှတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ KDE နဲ့ Windows7လိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်ပြီးအရာရာကိုတောင်လွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ပုံမှန်အတိုင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံသို့မသွားချင်ကြဘူး။ ၀ င်းဒိုးကိုအသုံးပြုသလား။ မင်းအတွက်ကောင်းတယ်။ GNU / Linux ကိုငြိမ်းချမ်းစွာသုံးကြပါစို့။ ငါတို့အလုပ်သွားကြကုန်အံ့ ကျွန်တော်တို့ကိုဗိုင်းရပ်စ်အခမဲ့ဖြစ်ကြပါစို့။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူကြပါစို့။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်နှင့်သင်၏ဝင်းဒိုးနှင့်အဆင်မပြေသောလူများနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖန်တီးရန်မလာပါနှင့်။
အစဉ်မပြတ်ငါ Aero တစ် ဦး KDE ညှိ xD ကြောင်းအရိပ်အယောင်ရှိခဲ့ပါတယ်
"windowsero" မှပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုသည်ဤနမူနာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါသတ်မှတ်ထားသော windows ရှိအားနည်းချက်များကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ပါသလား sethc.exe၊ သင်ကဲ့သို့ထင်သလား။ ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ ကွန်ယက်တစ်ခုအတွက်ကွန်ယက်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုဖန်တီးသကဲ့သို့မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းရှိကျွန်ုပ်၏လူဟောင်းသည်၎င်းတို့ proxies သုံးရန်သင်ကြားပေးသော ၀ င်းဒိုးရှိတိုင်း IP လိပ်စာကို linux တွင်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်လိုသည် ကွန်ယက်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိသည်။ အမှုအရာပျောက်ဆုံးနေသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ကိုသင့်အားငြင်းပယ်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြတင်းပေါက်များတပ်ဆင်ရန်သင်၏မှော်လက်များကိုငှားရမ်းသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။
အခုအချိန်မှာ "အရာရာတိုင်းကိုအလုပ်ချင်သောသာမန်အသုံးပြုသူများ" ငါ့မြို့ကိုလေယာဉ်စီးပြီးပြတင်းပေါက်များပြည့်နေသောဖခင်ကိုမိမိကိုယ်ကို fuck ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါ (အသက် ၅၀ အရွယ်ကောင်လေး၊ အထက်တန်းကျောင်းရူပဗေဒဆရာ) အခုသူက "metro" ကိုသုံးရတော့မယ်။ Lubuntu နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကောင်လေးကိုတစ်သက်တာအတွက် Windows XP အတွက် interface အဟောင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲစင်တာကိုဖြတ်လမ်းတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်မရှိ၊ သူလည်းပျော်တယ်။ ငါ့အိမ်ကိုလာဖို့ငါတိုက်တွန်းတယ်။ ဘာကြောင့်အခု METRO ကိုသုံးရတယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီး ...
သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကိုသင့်အတွက်လုပ်ဖို့ command line နဲ့ configuration files ဘယ်လောက်များများလုပ်ခဲ့လဲ။
၀ င်းဒိုးတွေ၊ လက်ထောက်တွေကိုသုံးသလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ သင်ဖိုရမ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ command တွေကိုကူးယူကူးယူစရာမလိုဘူး။
အကယ်၍ သင်သည် network connection အများအပြားကိုရည်ညွှန်းပါက graphical ကဲ့သို့ရိုးရှင်းသော connection connection ကိုဖွင့်ပြီးသင်လိုချင်သော profiles များကိုထည့်ပါ
မျက်မှောက်၌ Troll ။
GNU / Linux ဖြန့်ဝေခြင်းကိုသင် install လုပ်ဖူးပါသလား
PS: GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီကြီးများမဟုတ်ဘဲသုံးစွဲသူများအသိုင်းအဝိုင်းများကပြုလုပ်သည်
လူမိုက်လုပ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်သို့မဟုတ်အခက်အခဲရှိသည်ဟုငြင်းခုံခြင်းမပြုပါ။ သင်ဟာအတော်လေးစွမ်းရည်ကင်းမဲ့သည်ဟုကောက်ချက်ချသည်။ တကယ်တော့မရေရာမှုသည်ပြတင်းပေါက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်သောလူများရှိပါသည်။ သင်နှင့်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှီပြုခဲ့ပါကသင်၏မှတ်ချက်များသည်မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ သင် troll တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ GNU / Linux ကိုမသုံးသောသင်၏အငြင်းပွားမှုများသည်လူထုံဖြစ်သည်။ ငါ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုသည်ဟုငါမပြော။
ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ထောက်ခံချက်လား။ ရယ်စရာဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အငြင်းပွားမှုများကိုငြင်းပယ်သောလူကြီးတစ်ယောက်ကဲ့သို့မခံစားရပါစေနှင့်။
Elav အတွက်။ သူ့ကိုနောက်ထပ်မှတ်ချက်များမပေးလိုက်ပါနှင့် (သို့) သူသည်ဆွေးနွေးမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာမည်သည့်အချက်သည်မည်မျှပင်ခိုင်မာသည်ဖြစ်စေ၊
ထောင်ပြီး။ ပက်ထရစ် ၇၂ သည်သင်ပြောသမျှအားလုံးဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူ့ကိုမှားရန်မကောင်းပေ။ SinceLinux သုံးစွဲသူများသည် ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများကိုမှားယွင်းစေသောကွန်ယက်အတွက်နာမည်ကောင်းရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်မမီပါစေနှင့်။
ဤ အချိန်မှစ၍ အခြားသူများကိုအငြိုးထားသည့်အသုံးပြုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်အရေးယူမည်။ ဘယ်သူမှပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ သူတို့ကပြင်ပကလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်သူတို့ကလျစ်လျူရှုကြတယ်၊ မှတ်ချက်ကိုတည်းဖြတ်တယ်၊ ပြုပြင်တယ်၊
agghh စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါကွင်းဆက်ကိုကျော်သွားလိုက်တာ၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားပြောတာတွေကိုမကြာသေးခင်ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာက - « SinceLinux အသုံးပြုသူများသည် ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများကိုမှားယွင်းစေပါတယ်»¬¬ ... ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက် .... ငါအတိအကျပန်းပွင့်ပစ်နိုင်ဘူး¬¬
ငါ့အတွက်မယုံသင်္ကာဖြစ်ခြင်းသည်မည်သို့ပြုမူရမည်ကိုမသိ၊ သူသည်တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းသိပြီးသူပြောနေသည့်အရာကိုအမှန်တကယ်မသိသော်လည်း၎င်းကိုပြောဆိုရန်စွမ်းအားနှင့်အတူခံစားရသောလူတစ် ဦး ၏အခြေအနေဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ငါမလိုအပ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမကျဖို့အတွက်ငါဟာအများကြီးဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကိုတားဆီးနေတယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။
သငျသညျသူလုပ်ပထမ ဦး ဆုံးကဲ့သို့မှတ်ချက်များ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားများ, ပင်ဖြစ်ပျက်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဝန်ခံဖို့ရှိသည် ... သူသည်ပြတင်းပေါက်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပေမယ့်မဆိုအလှူငွေမပါဘဲနှင့်တစ် trolls မှတ်ချက်ကြောင့်မြုံ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီးလျှံကိုနှိုးဆွသောကြောင့်ပဲငါ့ကိုနှောင့်အယှက် လူတွေကတစ်ခုခုကိုဘာမှမသိဘဲဘာမှမပြောဘဲလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ ... ငါ့ကိုလား ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးကိုအနည်းဆုံး ၄ နှစ်ကြာတိုက်ရိုက်မသုံးခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်မသုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်မသက်မသာဖြစ်ပုံကိုယနေ့မပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုအခြားအသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးများတွင်ကျွန်ုပ်ပြောနေသည်ကိုမည်သူမျှမမြင်ပါ။ ငါရှင်းပြဖို့ငါမရှင်းပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အ distro ငါ့အဘို့ငါလိုအပ်သမျှပေးသည် ...
လူတို့၊ ဤဆွေးနွေးမှုဖြင့်စာကိုညစ်ပတ်စေသောကြောင့်စိတ်မကောင်းပါ။ @elav @nano သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များအပါအ ၀ င်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုံးကိုဖျက်လိုပါကကျွန်ုပ်ကန့်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပို့စ်သည်ပိုမိုတိကျလိမ့်မည်။ D အားလုံးကို: v
အားလုံးကောင်းပါတယ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သည်းခံခြင်းကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်
အသုံးပြုသူအေးဂျင့် xDDDD နှင့်အတူ trolling
hahaha, asshole xD
Muchach @ s «အစာစားမကျွေးပါနှင့်»
ဒါ့အပြင်မင်း Arch ကို XD ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်
ကောင်းသော post 🙂
... ဒါပေမယ့် @ patricio72 အကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်တာကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဉာဏ်လင်းအောင်လုပ်ကြည့်ရအောင်၊ မင်းဘာပြောနေတာလဲမင်းမသိဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုမည်ဆိုပါကဒေသခံထင်ဟပ်ပြသမှုကိုဖန်တီးရန်ဘာကြောင့်ဤမျှလောက်များပြားသောပြ(နာ (သို့မဟုတ်ထိုနှစ်ခုအတွက်သုံးခု) ဖြစ်သနည်း။
upstream သည် software ကို update လုပ်ခြင်းနှင့် makepkg ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်လျှင်မကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူ ...
အခြေခံအားဖြင့်အောက်ပါအချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် AUR ဆော့ဖ်ဝဲလ်များစွာကိုသုံးသည်၊ ဟာသမရှိဟုပြောသောအခါ၊ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် AUR မှအထုပ် ၃၀ ခန့်ကို install လုပ်ထားပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းသည် PKGBUILD တစ်ခုချင်းစီကိုကိုင်တွယ်ရန်အနည်းငယ် ပို၍ ဖရိုဖရဲဖြစ်လာပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အားဗဟိုပြုထားပါသည်။ PKGBUILDs များကိုပိုမိုစနစ်တကျ ပြင်ဆင်၍ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။
ငါဒီအထုပ်ကိုစောင့်ရှောက်: http://chakra-project.org/ccr/packages.php?SeB=m&L=2&K=msx (ကျွန်ုပ်တွင်ကိုယ်ပိုင် ၆၀ ခန့်ခန့်တပ်ဆင်ထားသည်) နှင့်ဒေသခံမိတ္တူများကို၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်တွင်ထားရှိသည်။
၎င်းကိုသင်ကထိန်းသိမ်းထားပြီးသင် AUR package များကိုတပ်ဆင်သောအခါသင်မထိန်းသိမ်းနိူင်ပါသလော၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ပြုပြင်သူများသည်သူတို့၏ PKGBUILDs များကိုခေတ်မမီတော့ဘဲတစ် ဦး ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ကအထုပ်ကိုဖျက်ပစ်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက AUR / CCR မှာရှိနေပြီး .. ငါ simon ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုတင်ပြီးပြီဆိုရင်ငါဖြစ်သွားတယ်။ ငါကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူကိုဆက်သွယ်ပြီးသူ့ကိုဘက်ထရီတွေတင်မွမ်းမံဖို့ပြောတယ်။ ပြန်ပေးဆွဲခံရပုံရတယ်။ ဂြိုဟ်သားများရှိနေခြင်း xD hahaha ၏အချို့သောမျိုး
ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသော application တွင်၎င်း၏ installation script မရှိတော့ပါကအောက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ပြီး၎င်းကို local update လုပ်ပြီးထည့်ပါ။ ခေတ်မမီတော့သောအထုပ်၏ပထမအကြိမ်သတိပေးချက်မှနှစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုမရှိသေးပါက TU ကိုလက်ရှိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူထံမှသိမ်းဆည်းယူရန်နှင့်အသစ်မူကွဲကိုတင်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်။
လက်ရှိအပ်လုဒ်တင်သူ / ထိန်းသိမ်းသူပေါ် မူတည်၍ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်သင့်အားအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုသည်၊ သူသည်မသိသောသူတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အထုပ်တစ်ခုတည်း ရှိ၍ ၎င်းငြင်းပယ်ရန်တောင်းဆိုသူကိုရပ်ကွက်အတွင်းသိလျှင်ချက်ချင်းပြုလုပ်သည်။
ထိုအရာက AUR package များအတွက် local repo ကိုအသုံးမပြုနိူင်ပါ။ P: P: P
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရပ်အပေါ် posting အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အတိအကျ! သင်၏နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အခါထိုအရာကိုမလုပ်ပဲခေါင်းကိုလက်သည်းကိုထိလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်အများဆုံး ... တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သောဖြေရှင်းနည်းလော သင် xD လိုချင်သမျှကိုပြုပြင် / သွင်း / ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် repo ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားခြင်းဖြင့် X အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
သင် Leprosys ဖြစ်ပုံရသည်
? ငါ Tete xD hahaha တယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Tete ကဲ့သို့သင်နှင့်ဖြစ်လျှင် local repository တစ်ခုဖန်တီးရန်အသုံးဝင်သည်။ သူရေးသားတဲ့ post မှာသူကကောင်းကောင်းရှင်းပြခဲ့ပုံရတယ်။
ကျွန်တော့်အမှု၌၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အထုပ်တစ်ထုပ်နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများကိုစုစည်းရန်ဗဟုသုတလည်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်မရောက်သေးပါ။
အလွန်ကောင်းသည်၊ ၃ လနှင့်ပြproblemနာမရှိပါ၊ archlinux တွင်တစ်ခုခုပျက်ကွက်ခြင်းအလွန်ရှားပါးသည်
Uff, Pedro Debian Flintstones နှင့် Pablo Slackware Marmol တို့သည်သူ၏ ဦး ခေါင်းကိုဝင်လာရန်ဂရုပြုပါ။
(ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ distro ဟာသူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိရုံသာမကခေတ်မီအထုပ်အပိုးတွေပါ ၀ င်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှဝန်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး>: D
ပါပလော Cardozo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်မိုက်မဲသောမေးခွန်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသောအထုပ် (ထည့်သွင်းခြင်း) လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မည်သည့်အမိန့်ပေးရမည်နည်း။ ငါမြင်သောအရာကိုမှ yaourt -S brackets ကိုပြုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ local repository တွင်မရှိသကဲ့သို့အရာအားလုံးကိုပြန်လည် download လုပ်ပြီး၊ sudo pacman -S brackets ကိုပြုလျှင်၎င်းသည်အထုပ်တည်ရှိခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပါသည်။
ငါလွဲချော်တာတစ်ခုခု ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်အလွန်ကောင်းသော post ကို။
Pablo Cardozo အားပြန်ပြောပါ
နံနက်ခင်းမိတ်လိုက်ပြီးနောက်သွေးသည်ငါ့ ဦး နှောက်ဆီသို့စီးဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ် pacman -U option နှင့်ကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်သို့ငါထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုငါသိလိုက်သည်။
သငျသညျလမ်းညွှန်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ဆောင်လျှင် pacman လုပ်သောအခါ - local packets များနှင့်သင်၏ repo အသစ်ကိုသင်ရလိမ့်မည်
သင်၏ repo ကို Pablo ဟုခေါ်ဆိုသည်ဆိုပါကဤသို့ဖြစ်လိမ့်မည် -
ဒေသခံ repo pablo -A ကွင်းခတ်
ဒီဟာကို repo ထဲကိုထည့်မယ်
sudo pacman - ကွင်းခတ်
၎င်းသည် local local အပါအဝင် repos ကို refresh လုပ်ပြီး local repo မှပရိုဂရမ်ကိုရှာဖွေပြီးတပ်ဆင်လိမ့်မည်
ဒေသခံ repo AUR -A ကွင်းခတ်
sudo pacman -Sy ပါ
sudo pacman -S ကွင်းခတ်
သင့်မှာပြproblemsနာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဖိုရမ်၊ IRC ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သလို G + via မှတဆင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
Tutorial: KDE Elementary OS style
Packages ကို Update / မအောင်မြင်ပါ - Space ပြuesနာများ - Free Up inodes